ပရော်ဖက်ရှင်နယ် အဆောက်အဦ အရုပ်များ ထုတ်လုပ်သူ | ဘန်ပေါင်
သင်ယူခြင်းတူးလ်များ အရုပ်များကို ပိတ်ဆို့ခြင်း။
တိရစ္ဆာန်များသည် အရုပ်များကို ပိတ်ဆို့သည်။
Ip Block ကစားစရာများ
Fire Block ကစားစရာများ
Space Block Toys ကိုစူးစမ်းပါ။
ရယ်စရာ ကစားစရာ အရုပ်များ
Farm Block ကစားစရာများ
အခြား အရုပ်များကို ပိတ်ဆို့ခြင်း။
OEM တွင် ထူးချွန်သည်။& ODM လုပ်ငန်း။
ကျွန်ုပ်တို့သည် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအမှတ်တံဆိပ်အဖြစ် အသိအမှတ်ပြုထားသော နိုင်ငံပေါင်း 70 နီးပါးသို့ တင်ပို့ရောင်းချပါသည်။
ထုတ်ကုန်အားလုံးသည် ၎င်း၏အမှတ်တံဆိပ် - BANBAO အောက်တွင်ရှိသည်။
ထုတ်ကုန်သည် EN71၊ ASTM နှင့် နိုင်ငံတကာ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ကွက်အရုပ်များအားလုံး၏ အရည်အသွေးနှင့် ဘေးကင်းရေးစံနှုန်းများနှင့် ကိုက်ညီပါသည်။ အမှတ်တံဆိပ်သည် နိုင်ငံပေါင်း 60 နီးပါးသို့ ဝင်ရောက်ပြီး ပညာရေးဆိုင်ရာ အဆောက်အဦ အရုပ်များကို လက်လီရောင်းချသူများနှင့် နောက်ဆုံးအသုံးပြုသူများအတွက် အရောင်းဝန်ဆောင်မှုပေးပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် စိတ်ကြိုက်တည်ဆောက်မှုဘလောက်ကစားစရာဝန်ဆောင်မှုကို ပေးဆောင်ပါသည်။ BanBao သည် ၎င်း၏ရုပ်ပုံ-Tobees ၏ သီးသန့်မူပိုင်ခွင့်ကို ပိုင်ဆိုင်သည်။ BanBao တွင်လည်း မော်ဒယ်နှင့် ပက်ကေ့ချ်တွင် သီးခြားဒီဇိုင်းဆွဲရန် ကတိပြုရန်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ ကလေးများအတွက် ဆောက်လုပ်ရေးကစားစရာများနှင့် အခြားထုတ်ကုန်များသည် မူပိုင်ခွင့်ပြဿနာများ အမြဲကင်းစင်နိုင်ကြောင်း အာမခံရန် သုတေသနနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအဖွဲ့လည်း ရှိပါသည်။
လူကြိုက်များသော အဆောက်အဦဘလောက် ကစားစရာများ
ကလေးငယ်များအတွက် BanBao တီထွင်ဖန်တီးမှုပျော်စရာတည်ဆောက်မှုဘလောက်အရုပ်များBanBao5in 1 ကလေးစားပွဲနှင့် ထိုင်ခုံအစုံ။Multi-Play Table နှင့် Building Block Table နှင့် Education Playing ၊ Learning ၊ Drawing နှင့် Dining အတွက် Storage နှစ်ခုပါရှိသော ထိုင်ခုံ၊ သက်တောင့်သက်သာ အကောင်းဆုံး လက်ဆောင် ယူသွားပါ။BanBao ထုတ်ကုန်များသည် ရောင်စုံနှင့် တီထွင်ဖန်တီးမှုရှိသော ဒီဇိုင်းဖြင့် ထုတ်ကုန်ဘေးကင်းမှုကို ပိုမိုသေချာစေရန် ABS ပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်ရေးပစ္စည်းကို အသုံးပြုထားသည်။အဆောက်အဦလုပ်ကွက်များ၏ မတူညီသော အစိတ်အပိုင်းများကို တပ်ဆင်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်တွင် ၎င်းတို့နှစ်သက်သည့်အရာများကို စိတ်ရှည်စွာ အာရုံစိုက်နည်းကို သင်ယူနိုင်သည်၊၎င်းတို့သည် ၎င်းတို့၏ လက်-မျက်လုံး ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းမှု၊ ယုတ္တိတန်သော တွေးခေါ်မှုနှင့် တီထွင်ဖန်တီးနိုင်စွမ်းတို့ကိုလည်း ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေနိုင်သည်။၎င်းသည် ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင်များကို နှစ်သက်သူများအတွက် ပြီးပြည့်စုံသော လက်ဆောင်တစ်ခုဖြစ်ပြီး ၎င်းသည် မိဘနှင့် ကလေးလှုပ်ရှားမှုများအတွက်လည်း ရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။3နှစ်အထက်ကလေးများအတွက်သင့်လျော်သည်။ထုတ်ကုန်အင်္ဂါရပ်များ1. ၎င်း၏ထူးခြားသောအရည်အသွေးကြောင့် ပြိုင်ပွဲမှ ထင်ရှားသည်။2. မြင့်မားသောအပူချိန်ခုခံ။3. splicing သည် အလွန်တည်ငြိမ်သည်၊ အစွန်းသည် ချောမွေ့သည်။4. Excellent ကဝတ်ဆင်ခုခံဆန့်ကျင်လမ်းချော်။5. အခြားအမှတ်တံဆိပ်များနှင့် အပြည့်အဝသဟဇာတဖြစ်ခြင်း။အခုဝယ်ပါတရားဝင် အွန်လိုင်း ဝယ်ယူမှု ဝဘ်ဆိုဒ်https://banbao.aliexpress.com/
BanBao | အရုပ်စက်ရုံ | Marble Run Gear ကစားစရာများ
ကလေးငယ်များအတွက် BanBao တီထွင်ဖန်တီးမှုပျော်စရာတည်ဆောက်မှုဘလောက်အရုပ်များBanBao ထုတ်ကုန်များသည် ရောင်စုံနှင့် တီထွင်ဖန်တီးမှုရှိသော ဒီဇိုင်းဖြင့် ထုတ်ကုန်ဘေးကင်းမှုကို ပိုမိုသေချာစေရန် ABS ပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်ရေးပစ္စည်းကို အသုံးပြုထားသည်။အဆောက်အဦလုပ်ကွက်များ၏ မတူညီသော အစိတ်အပိုင်းများကို တပ်ဆင်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်တွင် ၎င်းတို့နှစ်သက်သည့်အရာများကို စိတ်ရှည်စွာ အာရုံစိုက်နည်းကို သင်ယူနိုင်သည်၊၎င်းတို့သည် ၎င်းတို့၏ လက်-မျက်လုံး ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းမှု၊ ယုတ္တိတန်သော တွေးခေါ်မှုနှင့် တီထွင်ဖန်တီးနိုင်စွမ်းတို့ကိုလည်း ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေနိုင်သည်။၎င်းသည် ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင်များကို နှစ်သက်သူများအတွက် ပြီးပြည့်စုံသော လက်ဆောင်တစ်ခုဖြစ်ပြီး ၎င်းသည် မိဘနှင့် ကလေးလှုပ်ရှားမှုများအတွက်လည်း ရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။3နှစ်အထက်ကလေးများအတွက်သင့်လျော်သည်။ထုတ်ကုန်အင်္ဂါရပ်များ1. ၎င်း၏ထူးခြားသောအရည်အသွေးကြောင့် ပြိုင်ပွဲမှ ထင်ရှားသည်။2. မြင့်မားသောအပူချိန်ခုခံ။3. splicing သည် အလွန်တည်ငြိမ်သည်၊ အစွန်းသည် ချောမွေ့သည်။4. Excellent ကဝတ်ဆင်ခုခံဆန့်ကျင်လမ်းချော်။5. အခြားအမှတ်တံဆိပ်များနှင့် အပြည့်အဝသဟဇာတဖြစ်ခြင်း။အခုဝယ်ပါတရားဝင်အွန်လိုင်းဝယ်ယူမှုဝဘ်ဆိုဒ်Aliexpress: https://banbao.aliexpress.com/BanBao အကောင်းဆုံး BanBao|ကလေးများအတွက် အရည်အသွေးမြင့် အဆောက်အဦအရုပ်များ မြို့ပြရထား စက်ရုံစျေးနှုန်း-BanBao၊BanBao သည် နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း ICTI(IETP), SEDEX နှင့် ISO တို့မှ စာရင်းစစ်ခွင့်ပြုထားပြီး၊ အဆိုပါအမှတ်တံဆိပ်သည် နိုင်ငံပေါင်း 60 နီးပါးသို့ ဝင်ရောက်ပြီး လက်လီရောင်းချသူများနှင့် အရောင်းဝန်ဆောင်မှုများကို ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါသည်။ အသုံးပြုသူများ။
ကလေးများအတွက် THE Land of WARRIORS with Intellective Building Block Toys | BanBao 2021
BanBao New IP Building Block Toys | စစ်သည်တော်များ | DOULUO တိုက်ကြီးလူကြိုက်များသောအဆောက်အဦဘလောက်ကစားစရာ | မျက်မမြင်သေတ္တာထုပ်ပိုးထားသော ကလေးကစားစရာလက်ဆောင်ဤကာတွန်းသည် Tang မိသားစုမှ "Douluo Continent" ဝတ္ထုမှ ဆီလျော်သည်။ တန်ဆန်းဂိုဏ်း၏ တပည့်တစ်ဦးဖြစ်သော တန်ဆန်းသည် အတွင်းဂိုဏ်းမှ ၎င်းတို့၏ ထူးခြားသော ကျွမ်းကျင်မှုအား ခိုးယူခြင်းကြောင့် တန်ဂိုဏ်းက သည်းမခံနိုင်ပေ။ ဒါပေမယ့် တန်ဆန်းက သူ့ကို လိုက်ဖမ်းတဲ့အခါ "Douluo Continent" လို့ ခေါ်တဲ့ တခြားကမ္ဘာကို ခုန်ဆင်းသွားတယ်။မှော်ပညာမရှိ၊ တိုက်ပွဲမရှိ၊ ကိုယ်ခံပညာမရှိသော်လည်း ကိုယ်ခံပညာ၏ တစ်ခုတည်းသော စိတ်ဝိညာဉ်ဖြစ်သည်။BanBao ထုတ်ကုန်များသည် ABS ပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်ရေးပစ္စည်းကို အသုံးပြုထားသောကြောင့် ထုတ်ကုန်ဘေးကင်းလုံခြုံမှုကို ပိုမိုသေချာစေရန်၊ အရောင်အသွေးစုံလင်ပြီး တီထွင်ဖန်တီးထားသော ဒီဇိုင်းများဖြင့်၊၎င်းသည် ကလေးငယ်များ၏ လက်-မျက်စိ ဦးနှောက် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုစွမ်းရည်ကို ပြုစုပျိုးထောင်ပေးနိုင်ပြီး ၎င်းတို့၏ တွေးခေါ်မှုနှင့် စိတ်ကူးဉာဏ်စွမ်းအားကို မြှင့်တင်ပေးနိုင်သည်။BanBao ရဲ့ ဒီဇိုင်းအဖွဲ့သည် ၎င်း၏ထုတ်ကုန်များကို စိတ်အားထက်သန်ပြီး လူငယ်များ၏ စိတ်ကူးစိတ်သန်းများကို လှုံ့ဆော်ပေးရုံသာမက ဆန်းသစ်သော ကစားကွက်များကို ဖန်တီးရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။သို့သော် ကလေးများ၏ ပညာရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို မြှင့်တင်ပေးသည့် အာကာသဆိုင်ရာ အသိပညာပေးမှုကို အားပေးသည်။ထုတ်ကုန်အင်္ဂါရပ်များ1. ၎င်း၏ထူးခြားသောအရည်အသွေးကြောင့် ပြိုင်ပွဲမှ ထင်ရှားသည်။၂။မြင့်မားသောအပူချိန်ခုခံ.၃။splicing သည်အလွန်တည်ငြိမ်သည်၊ အစွန်းသည်ချောမွေ့သည်။4. Excellent ကဝတ်ဆင်ခုခံလမ်းချော်မှု တိုက်ဖျက်ရေး.၅။အခြားအမှတ်တံဆိပ်များနှင့် အပြည့်အဝလိုက်ဖက်သည်။.
တရုတ် BanBao ပညာရေးဆိုင်ရာ အဆောက်အဦ Blocks ထုတ်လုပ်သူ | တိရစ္ဆာန်စီးရီး | ပစ္စည်းနံပါတ်- ET800-1
BanBao China BanBao Educational Building Block ထုတ်လုပ်သူ - BanBao၊ BanBao တွင် ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များသည် မူပိုင်ခွင့်ပြဿနာများ အမြဲကင်းစင်နိုင်ကြောင်း အာမခံရန်အတွက် မော်ဒယ်နှင့် ပက်ကေ့ခ်ျတွင် လွတ်လပ်သောဒီဇိုင်းကို ကတိပေးရန်အတွက် သုတေသနနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအဖွဲ့တစ်ခုရှိသည်။
BanBao Co., Ltd. ကို 2003 ခုနှစ်တွင် စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။
၎င်းသည် သုတေသန၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့် ပညာရေးဆိုင်ရာ ပလတ်စတစ်တုံးအရုပ်များနှင့် မွေးကင်းစကလေးမူကြိုအဆောက်အအုံဘလောက်ကစားစရာများ ထုတ်လုပ်ခြင်းအတွက် အထူးပြုသော ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အဆင့်မြင့် ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ကွက်အရုပ်များ ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။
ကုမ္ပဏီသည် စတုရန်းမီတာ ၆၅,၈၀၀ ကျယ်ဝန်းပြီး ယင်းတွင် စက်ရုံများ၊ ရုံးခန်းများ၊ အဆောင်များနှင့် ဂိုဒေါင်များ တည်ဆောက်ထားသည်။ BanBao တွင် အသိဉာဏ်ထိန်းချုပ်မှုစနစ်ဖြင့် ၎င်း၏တိကျသောမှိုအလုပ်ရုံရှိပြီး၊ ပလပ်စတစ်ဆေးထိုးစက် 180 ကျော်ရှိပြီး ပလပ်စတစ်တုံးများအတွက် အလိုအလျောက်တပ်ဆင်ခြင်းနှင့် ထုပ်ပိုးသည့်စက်များကို ဖန်တီးပေးပါသည်။ ကလေးများနှင့် ကလေးများအတွက် အဆင့်မြင့် အဆောက်အဦတုံးများ ဖန်တီးခြင်း။ အရုပ်များတည်ဆောက်ခြင်းကို နှစ်သက်သော ကစားသမားများနှင့် အရုပ်လုပ်ငန်းရှိ သူငယ်ချင်းများနှင့် လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များအားလုံး ဘုံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို ရှာဖွေကာ ပိုမိုကောင်းမွန်သောအနာဂတ်ကို ဖန်တီးရန် အတူတကွလုပ်ဆောင်ကြရန် ကျွန်ုပ်တို့ကြိုဆိုပါသည်။
အမှတ်တံဆိပ်သည် နိုင်ငံပေါင်း 70 နီးပါးသို့ ဝင်ရောက်သည်။
BanBao Building Blocks သည် ကလေးများအတွက် Amazon ပရိုမိုးရှင်း | ၂၀၂၁BanBao သည် သုတေသန၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့် ပညာရေးဆိုင်ရာ ပလတ်စတစ်တုံးကစားစရာများနှင့် မွေးကင်းစကလေးမူကြိုဘလောက်ကစားစရာများ ထုတ်လုပ်ခြင်းအတွက် အထူးပြုသော ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အဆင့်မြင့်နည်းပညာထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ထုတ်ကုန်များသည် ABS Environmental Protection material ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။ကလေးငယ်များ လက်-မျက်လုံး ညှိနှိုင်း၍ အာကာသအာရုံကို ဖွံ့ဖြိုးစေခြင်း၊စိတ်ကူးစိတ်သန်း၊ တီထွင်ဖန်တီးနိုင်စွမ်းနှင့် ဘာသာစကားအသုံးအနှုန်းများ။ထုတ်ကုန်အားလုံးသည် ၎င်း၏အမှတ်တံဆိပ် BANBAO အောက်တွင်ရှိသည်။ ထုတ်ကုန်သည် EN71၊ ASTM နှင့် နိုင်ငံတကာအရုပ်များအားလုံး၏ အရည်အသွေးနှင့် ဘေးကင်းရေးစံနှုန်းများနှင့် ကိုက်ညီပါသည်။ အမှတ်တံဆိပ်သည် နိုင်ငံပေါင်း 60 နီးပါးသို့ ဝင်ရောက်ပြီး လက်လီရောင်းချသူများနှင့် နောက်ဆုံးအသုံးပြုသူများကို အရောင်းဝန်ဆောင်မှုပေးပါသည်။ဘုံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုရှာကာ ပိုမိုကောင်းမွန်သောအနာဂတ်ကိုဖန်တီးရန် အရုပ်လုပ်ငန်းရှိ သူငယ်ချင်းများနှင့် လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်အားလုံးကို ကြိုဆိုပါသည်။Amazon Store မှာ BanBao မှာ ဘာတွေပါလဲ၊ယခုရှာဖွေပါ - https://www.amazon.com/banbao
BanBao Building Blocks ကလေးများအတွက် ခရစ္စမတ် ပရိုမိုးရှင်း | လက်ဆောင်အရုပ်များ 2021ခရစ္စမတ်နေ့အတွက် BanBao အဆောက်အအုံအရုပ်များ အခမ်းအနား။ဆန်တာ ကလော့စ်၊ ခရစ္စမတ်သစ်ပင်၊ နှင်းလူသား၊ သမင်အုပ်ကား၊ လက်ဆောင်များ၊ ခရစ္စမတ် အဆောက်အဦတုံးများ စီးရီး။ခရစ္စမတ်ပွဲတော်အတွက် သင်ဘာကိုမျှော်လင့်ချက်အရှိဆုံးလဲ။--BanBao ဆောက်လုပ်ရေးဘလောက်အရုပ်များသည် သင်၏အကောင်းဆုံးလက်ဆောင်ရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်။တပ်ဆင်ရလွယ်ကူသော အရည်အသွေးမြင့် ABS ပစ္စည်းဖြင့် ပြုလုပ်ထားသော ဘေးကင်းပြီး တာရှည်ခံသော BanBao တည်ဆောက်သည့် အရုပ်များ။ ချောမွေ့သောလက်ခံစားမှုဖြင့် ကလေးများအတွက် အန္တရာယ်ကင်းအောင် ပြုလုပ်ပါ။အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို အောက်ပါ website တွင်လည်း ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။Aliexpress: https://banbao.aliexpress.com/store/3109083Amazon- https://www.amazon.com/banbao
BanBao Building Block Toys Professional Supplier လက်ကား
BanBao Building Blocks ကလေးများအတွက် ခရစ္စမတ် ပရိုမိုးရှင်း | လက်ဆောင်အရုပ်များ 2021BanBao ထုတ်ကုန်များသည် ABS Environmental Protection material ဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီး၊ကလေးငယ်များ လက်-မျက်လုံး ညှိနှိုင်း၍ အာကာသအာရုံကို ဖွံ့ဖြိုးစေခြင်း၊စိတ်ကူးစိတ်သန်း၊ တီထွင်ဖန်တီးနိုင်စွမ်းနှင့် ဘာသာစကားအသုံးအနှုန်းများ။ထုတ်ကုန်အားလုံးသည် ၎င်း၏အမှတ်တံဆိပ် - BANBAO အောက်တွင်ရှိသည်။ ထုတ်ကုန်သည် EN71၊ ASTM နှင့် နိုင်ငံတကာ အရုပ်များအားလုံး၏ အရည်အသွေးနှင့် ဘေးကင်းရေး စံနှုန်းများနှင့် ကိုက်ညီပါသည်။ အမှတ်တံဆိပ်သည် နိုင်ငံပေါင်း 70 နီးပါးသို့ ဝင်ရောက်ပြီး လက်လီရောင်းချသူများနှင့် နောက်ဆုံးအသုံးပြုသူများကို အရောင်းဝန်ဆောင်မှုပေးပါသည်။BanBao အဖွဲ့သည် သုတေသနနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုများ ပြုလုပ်ရန်၊ ကလေးများအားလုံးအတွက် ထုတ်ကုန်အသစ်များ ဖန်တီးကာ ပျော်ရွှင်စရာနှင့် တီထွင်ဖန်တီးမှုများ ပြည့်နှက်နေသော ဘလောက်ကမ္ဘာကို တည်ဆောက်ရန် အမြဲတမ်း အပ်နှံထားသည်။အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို အောက်ပါ website တွင်လည်း ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။Aliexpress: https://banbao.aliexpress.com/store/3109083Amazon- https://www.amazon.com/banbao
BanBao Building Block Educational Toys For Boys | ရယ်စရာကောင်းသော လင်းယုန်ငှက်Bald Eagle ကို တရုတ်ရှေးဟောင်း စာပေ လက်ရာများတွင် မကြာခဏ အသုံးပြုလေ့ရှိပြီး ခိုင်မာသော အရေးပါသော စွမ်းအား၏ ပုံသဏ္ဍာန်ကို ကိုယ်စားပြုပါသည်။ ဤသည်မှာ အမျိုးသားရေးစိတ်ဓာတ်၏ သင်္ကေတဖြစ်သည်။အဆောက်အဦ အစိတ်အပိုင်းများမှတဆင့် Bald Eagle ၏ အတောင်ပံများသည် အီလက်ထရွန်နစ် အစိတ်အပိုင်းများဖြင့် ထိန်းချုပ်နိုင်ပြီး ထိပ်ပြောင်သော လင်းယုန်သည် မည်မျှချစ်စရာကောင်းသည်ကို ကြည့်ပါ။ကလေးများသည် ညွှန်ကြားချက်လက်စွဲကို အဆင့်ဆင့်လိုက်နာခြင်းဖြင့် အဆောက်အအုံကို ပြီးမြောက်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ မိသားစုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုလုပ်ငန်းစဉ်ကို ပျော်မွေ့နေစဉ် ဆောက်လုပ်ရေးအဆောက်အအုံကို အပြီးသတ်ရန် မိဘများနှင့် ကလေးများကို အတူတကွလုပ်ဆောင်ရန် ကျွန်ုပ်တို့ အကြံပြုအပ်ပါသည်။
US သို့ စာရေးပါ။